ZTE Axon Mini: fanadihadiana sy hevitra | Androidsis
Alfonso de Frutos | | hevitra, ZTE
Nandritra ny fanontana farany an'ny IFA tany Berlin, dia gaga ilay mpanamboatra sinoa tamin'ny fitokanana ny tsipika Axon, karazana terminal avo lenta izay hahatratra ny tsena eropeana. EFA nahita ny ZTE Axon Elite izahay, izao dia anjaran'ny ZTE Axon Mini.
Mazava ho azy, mazava be izany: ity ZTE ity dia manana Mini kely. Fantsona marina amin'ny resaka fampisehoana, miaraka amina endrika hafa sy mamaky tany ary misy tokana fa: mitohy miasa miaraka amin'ny Android 5.1. Tsy avelako intsony ny fotoana farany avelako anao miaraka aminy famakafakana amin'ny teny espaniola an'ny ZTE Axon Mini.
1 Volavola mahery setra sy hafa
3 MiFavor, sosona manamaizina ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny bloatware manelingelina azy
4 ZTE Axon Mini dia mampiseho hozatra miaraka amin'ny efijery AMOLED tsy mampino
5 Fakan-tsary feno nefa tsy misy fametavetana
6 Gallery of sary nalaina niaraka tamin'ny ZTE Axon Mini
Volavola mahery setra sy hafa
Araka ny efa hitanao tamin'ny famakafakana video tamin'ny Espaniôla an'ny ZTE Axon Mini, ity finday ity dia manana endrika mahavariana ary tsy mahazatra, noho izany grill telozoro amin'ny mpandahateny, ankoatry ny tonony volamena an'ny terminal.
Momba ny safidin'ny loko ZTE, lazao fa any amin'ny faritany aziatika ny Loko volamena na ny champagne dia miteraka fahatsapana eo amin'ireo mpampiasa ka nanapa-kevitra ny mpanamboatra sinoa fa hanandrana io loko io ihany amin'ny tsena eropeana. Raha izaho manokana dia tiako ny manana loko maro kokoa, saingy amin'ny fanandramana ireo lokony.
Ary avy eo misy ny olana momba ny grill eo aloha. Tiako manokana izany, na dia fantatro aza fa misy olona hatsipy amin'izany famolavolana izany. Na dia tsy misy afaka mandà aza ny ZTE Axon Mini dia manana famaranana kalitao.
Hitantsika ao aminy ny ohatra voalohany vatana vy vita amin'ny firaka alimina-titanium manome fanoherana lehibe ny terminal. Ho fanampin'izay, ZTE dia nanome ny Axon Mini famaranana voadio hanatsara ny fihazonana.
Izay tsy ekeko loatra dia ny ao aoriana. Ny terminal ZTE dia manana vatana vy, fa eo amin'ny lafiny ambony sy ambany dia afaka ahitantsika kodiarana sandoka roa, tena Note 4 style, izay nametrahan'izy ireo ny antennas. Vahaolana marim-pototra izany taona vitsy lasa izay, saingy toa tsy mety amiko izao fa ny ZTE dia nisafidy an'ity rafitra ity. Na dia marina aza fa ity faritra ity dia mahafinaritra ny manohina ary manalefaka ny fahatsapana vy mangatsiaka, ny tena marina dia ny fanaparitahana hoditra sandoka dia manapotika be amin'ny hatsaran'ny finday.
Mitohy amin'ny lamosina, mivoaka ny sensor cap capitive capacitive izay miasa na dia eo amin'ny efijery aza ary miasa ohatra, mamaha ny telefaona. ny fakan-tsary sy flash LED roa Izy ireo dia mibodo ny toerana ampiasain'ny rafitry ny fakantsary roa an'ny Axon Elite, izay mampiseho eo anelanelan'izy ireo ny endrika telozoro mampiavaka azy eo alohan'ny mpandahateny.
Eo amin'ny sisiny eo alohan'ny ZTE Axon Mini hahita efijery iray hipetraka amin'ny ankamaroan'ny velarana isika noho ny bezela kely indrindra. Ny Axon Mini dia tsy manana bokotra Android ara-batana, fa kosa mampiasa bokotra rindrambaiko azo afenina amin'ny fotoana rehetra, safidy tena ilaina.
Ny bokotra fanaraha-maso ny feony dia azo jerena amin'ny ilany havia amin'ny telefaona, raha eo amin'ny ilany ankavanana kosa no misy ny bokotra on sy ny terminal, ho fanampin'ny lovia ho an'ny karatra nanoSIM roa na karatra SD nanoSIM + micro SD.
Ny telefaona dia misy fikasihana mahafinaritra, Misaotra ny vatany metaly, ankoatry ny fanomezana fikajiana tsara, zavatra tiako. Ny lanjany 140 grama dia mampiadana ny telefaona ary tsy mahasasatra ny lanjanao aorian'ny fampiasana maharitra. Tena tiako ny zava-misy fa ny ZTE Axon Mini dia mampiditra mpandahateny an-tariby satria amin'ity fomba ity dia tsy manarona ny famoahana feo amin'ny tanako aho rehefa mijery horonantsary na milalao lalao video. Asehoy ny ZTE amin'ity lafiny ity.
lafiny X X 143.5 70 7.9 MG
Operating System Android 5.1.1 L
efijery AMOLED 5.2 5.5 santimetatra 1920 × 1080 teboka (424dpi)
processeur Qualcomm Snapdragon 616 valo fotony (fotony efatra A-53 amin'ny 1.5 GHz ary cores 4 Cortex A-53 hafa amin'ny 1.2 GHz)
Tahiry anatiny 32GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 128GB.
Fakan-tsary aoriana Samsung 3M2 13 megapixels + 2 megapixels misy rafitra fakan-tsary roa / autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation
Conectividad DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM radio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Tarika 3G (HSDPA 850/900/1900/2100) Tarika 4G (tarika 1 (2100) 3 (1800) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 20 (800) 38 (2600) 40 ( 2300) 41 (2500)
Fitaovana hafa Vatan'ny vy / sensor an'ny dian-tànana / fanondroana haingana / gyroscope / iris
bateria 2.800 mAh tsy azo esorina
vidiny 285 euro amin'ny Amazon
Amin'ny lafiny ara-teknika dia miatrika telefaona mahery isika. Miaraka amin'ity hardware ny ZTE Axon Mini Izy io izao dia mandrakotra an'ity elanelam-potoana vaovao ity, manolotra vahaolana tena feno izay hahafahanao mankafy ny atiny multimedia na lalao video tsy misy olana be loatra, araka ny hitanao tamin'ny famerenan-dahatsary.
Ny ZTE Axon Mini dia manana manohana Force Touch eo amin'ny efijeryo, izany hoe ny fanekena ny tsindry mihatra amin'ny efijery. Androany dia vitsy dia vitsy ny rindranasa manararaotra an'ity teknolojia ity, fa ny zava-misy afaka mamorona pin izay, ankoatry ny fanoratana ny kaody, dia mamela anao handamina ny haavon'ny tsindry ihany koa, manome ny ZTE Axon Mini fiarovana fanampiny ao an-tsaina foana. volavolan-dalàna.
El sensor cap cap capacitive mipetraka any aoriana dia mandeha tsara. Tsy ny haingana indrindra eny an-tsena no mamaky ny dian-tànana, fa avo ny tahan'ny fanekena azy. Azontsika atao ihany koa ny mamoha ny ZTE Axon Mini amin'ny alàlan'ny rafi-dohany am-peo sy iris, na dia manana olana hafa aza izy ireo; Indraindray dia tsy mahomby ny fanekena ny kabary ary ny iris mpamaky dia manana olana amin'ireo manao solomaso. Aleo mifikitra amin'ny rafitra mamoha ny dian-tànana ary avelao hiseho amin'ny iris ny namana iris sy ny feo.
Te-hanasongadinana ny chip voatokana ho an'ny fitantanana audio AK4961 DAC, manome ny ZTE Axon Mini tena tsara kalitao amin'ny feo, noho ny fanolorana kalitaon'ny feo Hi-Fi.
Moa ve izy io miasa mitovy amin'ny Samsung Galaxy S7? Mazava ho azy fa tsia, fa hihoatra ny filan'ny mpampiasa mpampiasa maro an'isa izany. Ilay puce Snapdragon 616 tonga lafatra amin'ny fampiasana isan'andro izy io, eny fa na dia ny filalaovana lalao video mila filana 3D aza. Ny fandanjalanjana ny fahombiazan'ny fihinanana sy fampisehoana dia mihoatra ny marina, na dia misy aza ny fizarana izay manamaizina ny fampiasana rehetra ny ZTE Axon Mini: ilay sosona manokana mampihoron-koditra.
MiFavor, sosona manamaizina ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny bloatware manelingelina azy
Tsy tiako ireo capes fanao ampiasain'ny ankamaroan'ny mpanamboatra. Heveriko fa ny HTC sy Samsung dia manao asa azo ekena kely indrindra, saingy, ankoatran'ny Motorola, izay manana fanjanahana faran'izay kely ny findainy ary izay ampian'izy ireo dia ilaina eo an-tampony, heveriko fa tsy tsara ny asan'ny marika amin'io lafiny io. Fa ny zavatra ZTE dia resaka fanalam-baraka.
Ny interface interface an'ny ZTE dia miankina amin'ny MiFavor, marina ilay kinova 3.2.0 izay mandeha amin'ny Android 5.1.1. Ny zava-misy fa ny telefaona mbola tsy nohavaozina amin'ny kinova farany an'ny rafi-piasan'i Google dia toa hadisoana tamiko, fa ny sosona manokana tsy zaka toa ny sangisangy amin'ny tsiro ratsy.
Tamin'ny voalohany dia toa tsara daholo ny zava-drehetra, ilay mpandefa launcher mahazatra tsy misy vatasarihana fampiharana izay efa hitantsika imbetsaka tany amin'ireo mpamokatra Aziatika hafa, saingy avy eo manomboka ireo fampandrenesana. ny fampandrenesana Voalohany, misy hafatra toa mangataka ny hanadiovana ny fitadidiana terminal sy ny fampiharana akaiky, manery anay hisafidy izay rindranasa tsy tokony hakatona. Avy eo dia manana fampandrenesana iray hafa izahay milaza fa miaro ny telefaoninay mandritra ny 400 andro ny rindranasa iray.
Ara-dalàna, satria raha dinihina ny isan'ny fampiharana efa napetraka mialoha dia antenaina fa antivirus ny sasany. Mahasoa na inona na inona ve izy ireo? Efa nolazaiko taminareo fa ny maro an'isa tsy. Ary tsy handany fotoana miresaka fotsiny aho ny rafitry ny fihetsika nataony, tsy ampy loatra ka nilavo lefona tamin'ny fampiasana azy bebe kokoa aho.
Ny hany zavatra angoniko amin'ity interface ity dia ny fanaingoana ny sary masina, ny mombamomba azy ary ny antsipiriany hafa izay tsotra sy mora azo, afaka manao personalize mora be ny telefaona.
ZTE Axon Mini dia mampiseho hozatra miaraka amin'ny efijery AMOLED tsy mampino
Raha afaka mirehareha zavatra ny ZTE Axon Mini dia ny efijery azy io. Ary izany ve ilay 5.2-inch AMOLED tontonana miaraka amin'ny teknolojia 2.5 D ary manana ny famahana ny 1920 x 1080 teboka manolotra kalitaon'ny sary tsy mampino. Ny haavony mifanohitra 5.000 1: XNUMX. Tena mazava ny lokony, noho io mainty tonga lafatra natolotry ny takelaka AMOLED io.
Ny zoro fijerena dia malalaka, ankoatry ny fiasa tsara ivelan'ny trano, ankoatry ny hazavana manjavozavo, ny ZTE Axon Mini dia lasa mpiara-miasa tonga lafatra ho an'ireo tia mamaky hatramin'ny nanesorany ny famirapiratany ho faran'izay kely indrindra azontsika vakiana nefa tsy voakorontana. efijery.
Raha fintinina, iray amin'ireo lafiny mahavariana indrindra amin'ny telefaona. Ary raha dinihintsika izany ny ZTE Axon Mini dia ambany noho ny 300 euro, Efa nolazaiko anao fa io no iray amin'ireo efijery tsara indrindra amin'ny fari-piainany. Raha mitady telefaona misy tontonana tsara ianao, ny ZTE Axon Mini dia safidy iray hodinihina.
Fakan-tsary feno nefa tsy misy fametavetana
Na dia efa zatra mahita terminal aza isika izay mametraka ny lens Sony, ny marina dia misy mpanamboatra hafa amin'ity tsena ity. Ary nanapa-kevitra ny ZTE ny miloka amin'ny Samsung, mametraka sensor Megapiksely 13 avy amin'ny mpamokatra Koreana.
Ilay sensor Samsung 3M2 manana rafitry ny fifantohana haingana, flash LED roa ary solomaso misy aperture f / 2.2. Ny valiny dia sary tsara amin'ny tontolo mamirapiratra, manolotra sary grains amin'ny toe-java-maivana.
El Tsotra tokoa ny rindrambaiko fakantsary, manolotra menio miafina tsotra eo amin'ny ilany havia izay mampiseho ireo fomba fakana sary voafaritra mialoha. Misongadina indrindra ny maody amin'ny tanana, izay hahafahantsika mamoaka ny mpaka sary izay ananantsika rehetra ao anatiny, manitsy ny soatoavina isan-karazany toy ny fifandanjana fotsy na ny toerana ISO.
Matokia fa, raha tsy te hirotsaka ianao, ny maody mahazatra, miaraka amin'ny fanovana rehetra mandeha ho azy, dia manome fikajiana sy fahombiazana tena tsara, maka sary tena tsara, nefa tsy mila manitsy masontsivana.
Somary diso fanantenana aho tamin'ny maody HDR. Na dia marina aza fa mandeha tsara izy dia lavitra ny valin'ny tolotra hafa. Azo antoka fa ny hevitry ny ZTe dia ny hitehirizana ny loko voajanahary amin'ny sary ary hialana amin'ny fanerena ny loko mavesatra amin'ny endrika HDR, saingy somary latsaka kely ihany izy ireo raha ny hevitro.
Ny fakan-tsary an-tsary koa dia manome fampisehoana tsara. Ny 8 megapixels XNUMX dia hahafaly ireo tia sary azy noho ny maody hatsarany, izay mamelombelona, ​​manazava ny hoditra ary mahatonga ilay olona nalaina sary ho mahia.
Na dia marina aza fa tsy manana kalitao 4K, ny ZTE Axon Mini dia afaka mandray an-tsoratra amin'ny endrika Full HD, Ho fanampin'ny fahafahanao mirakitra horonantsary Timelapse sy mihetsika miadana. Farany dia avelako ianao miaraka amina andian-tsary nalaina niaraka tamin'ny ZTE Axon Mini mba hahitanao ny kalitaon'ny solomaso.
Gallery of sary nalaina niaraka tamin'ny ZTE Axon Mini
Ary farany te-hiresaka momba ny fizakantena aho. Ny ZTE Axon Mini dia manana bateria lithium tsy azo esorina izay mahatratra 2.800 mAh. Raha jerena ny fitaovan'ny finday ZTE vaovao dia mazava fa afaka manohana ny lanjany feno izy, fa mandra-pahoviana?
Amin'io lafiny io dia nanaitra ahy tamim-pifaliana ny ZTE Axon Mini. Amin'ny fampiasana isan'andro, milalao lalao, mijery horonan-tsary roa, tambajotra sosialy ary mailaka mifandrindra ary ny telefaona dia nitazona tsara nandritra ny iray andro sy sasany. Tonga amin'ny 6 ora miaraka amin'ny efijery.
ZTE dia nanatsara tsara ny telefaona, izay manome mihoatra ny fizakantenam-bola tsara, mihoatra ny maodely hafa amin'ny faritra mitovy aminy. Na dia tsy manana rafitra fikirakirana haingana aza izy dia tokony homarihina fa ny charger 1.5 A dia mamela ny ZTE Axon Mini ho voampanga ao anatin'ny adiny roa monja.
Ny ZTE Axon Mini dia toa finday tsara izay Izy io dia manana fitaovana fampifanarahana, kalitaon'ny feo tsara ary efijery izay miavaka amin'ireo mpifaninana aminy. Saingy ny interface manokana mahazatra mahasosotra dia mampihena kely ny traikefa amin'ny fampiasana telefaona izay mety ho nanome bebe kokoa amin'ny fampiasana interface tsy dia be loatra amin'ny fampiharana sy bloatware.
Tena avo lenta ny kalitaon'ny feo
Ny efijery AMOLED dia tsara
Ny rindrambaiko fakan-tsary dia tena tsara
Mbola tsy nahazo Android 6.0 ianao
ny scanner iris sy ny faneken'izy ireo ny feo dia mitaky fotoana hahafantarana anao
Ny interface manokana no ratsy indrindra nanandrana ahy,
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » ZTE Axon Mini: famakafakana sy hevitra
Carmen P. dia hoy izy:
Araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny famerenana, ny efijery no tsara indrindra amin'ity finday ity ary koa ny feo. Tratrako vao tsy ela akory izay tamin'ny € 219 tao amin'ny vayva.es
Valiny tamin'i Carmen P.
Misy sary manjavozavo iray hafa amin'ny Nexus Sailfish
Google Duo, misy anio amin'ny Android sy iOS